कंक्रीट bollards → पार्किंग • बाड़ • Ultratense कंक्रीट
सानो वास्तुकला हल्का श्रृंगार वास्तु वस्तुहरू भित्र मिश्रित सहरी अन्तरिक्ष वा एक निजी सम्पत्तीमा अवस्थित हुन्छ र दिइएको ठाउँमा विशेष वर्ण दिन्छ। कंक्रीट पोष्टहरू, आधुनिक बेंचहरु, शेड, टेबल, फूलहरू फूलहरु संग, फोहरको डिब्बा, साइकल स्ट्यान्ड, रूख कभरहरू र खेल मैदानहरूले ठाउँलाई जीवन्त बनाउँदछ र अनौंठो, सुन्दर र कार्यशील बनाउँदछ।
त्यस्ता तत्त्वहरू ठोस बोलार्डहरू पनि हुन्छन् शहरी ठाउँमा र गोलाकार गति अवरोध गर्दै दिइएको क्षेत्रमा। तिनीहरू एक सजावट हो र एकै समयमा एक महत्त्वपूर्ण प्रकार्य छ, अनुपयुक्त स्थानहरूमा पार्किंग रोक्न।
डिजाइनको बिभिन्नताले क concrete्क्रीट पोष्टको छनोटको लागि अनुमति दिन्छ जुन वरपरको सहरी ठाउँसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने पोष्टहरू काठ, इस्पात र कंक्रीटबाट बनेका हुन्छन्।
क wooden्क्रीट फेंस पोष्टहरू, काठका पोष्टहरू जस्तो नभई, धेरै टिकाऊ सामग्रीले बनेको हुन्छ जुन सडदैन र कीराहरूको आक्रमण प्रतिरोध गर्दछ।.
कंक्रीट पोष्टहरू कडा र टिकाऊ हुन्।
तिनीहरू प्राय: फार्म, घर बगैचा र पछाडिको क्षेत्र, साथै शहरी सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ पार्किंग बोलार्ड्स वा फेंसिंग।
कंक्रीट फेंस पोष्टहरू साना वास्तुकलाको एक अविभाज्य तत्व हुन्, सार्वजनिक स्थानहरूमा मात्र होइन, निजी सम्पत्तीहरूमा पनि।
एउटा बारले यसको फंक्शन राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न भनिन्छ जब यसले राम्रो प्रदर्शन गर्दछ फेंस पोष्टहरूत्यो तिनीहरूलाई बनाउन। सामग्री जुन उनीहरूले बनाउनेछन् तपाईंलाई तिनीहरूको सामर्थ्य र अनुप्रयोग निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। फेंस पोष्टहरू काठ, धातु, क concrete्क्रीट वा गेल्भनाइज्ड इस्पातबाट बनाउन सकिन्छ।
तिनीहरू मूल्य, स्थायित्व, स्थापनाको सहजता र सौन्दर्यमा फरक छन्।
यद्यपि बारहरू कंक्रीट तिनीहरू धेरै टिकाऊ हुन्, तिनीहरूको नोक्सान भंगुरता र लगातार क्र्याकिंग हो। यदि पानी दरारमा सlects्कलन गर्दछ भने, यो जाडोमा स्थिर हुन्छ र यसले पोष्टको केही भागहरू बन्द गर्न सक्छ।
केहि व्यक्तिले अन्य सामग्रीहरू सहित बनेका पोष्टहरू प्रयोग गर्न रुचाउँछन्: जस्ती इस्पात, धातु वा काठ
कंक्रीट पोष्टहरू तिनीहरू सामान्यतया उनीहरूको काठका समकक्षहरू भन्दा महँगो हुन्छन्, तर वार्षिक मर्मतसम्भार र गर्भाधानको आवश्यकता पर्दैन।
नकारात्मक पक्ष भनेको यो मध्यम हो ठोस पोष्ट kg० किलोग्रामसम्म तौल, जसले असेंबलीको लागत बढाउँदछ, अर्कोतर्फ, क concrete्क्रीट पोष्टहरूले वास्तवमै ठोस समर्थन प्रदान गर्दछ।
कंक्रीट बोलार्डहरू घर सुधार स्टोरहरूमा वा सिधै निर्माताबाट किन्न सकिन्छ, जसले सामान्यतया अधिक स्थायित्व र कम साधारण डिजाइनको साथ उत्पादन प्रदान गर्दछ।
कंक्रीट पोष्टहरू शहर फार्म डिजाइन
शहर फारम डिजाइन क concrete्क्रीट bollards एक आधुनिक डिजाइन को विशेषता हो, र यी उत्पादनहरु को उच्च गुणवत्ता को सामग्री र टेक्नोलोजिकल प्रक्रिया को लगातार चेक द्वारा सुनिश्चित गरीएको छ।
हाम्रो कम्पनी सबै भन्दा राम्रो संग काम गर्दछ स्थापत्य स्टूडियो र डिजाइनरहरू, जसले यसबाट उत्पादित सानो वास्तुकला तत्वहरूको उत्तम शैली र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्दछ।
शहर डिजाइन पोल्याण्डमा इटालियन कम्पनीहरू मेटलको र बेलतालियाको विशेष प्रतिनिधि हो।
मेटलकोले सानो बगैंचा र शहर आर्किटेक्चर उत्पादनहरू इस्पात र काठबाट बनेको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
प्रस्तावमा सहरी अन्तरिक्ष, अर्थात् पार्क, सडक, बगैंचा र स्टेशनहरु को तत्वहरु सामेल छन्।
मेटलकोले बेंचहरू, सडक बास्केटहरू, पोष्टहरू, सूचना बोर्डहरू, रूखहरूको कभरहरू, फूलहरूको भाँडाहरू, साइकल र्याक्स र विभिन्न प्रकारका सडक फर्नीचरहरू उत्पादन गर्दछ, जस्तै शहर डेक कुर्सीहरू।
बेलतालिया एक अग्रणी निर्माण कम्पनी को एक हो कंक्रीट, संगमरमर र प्राकृतिक ढु stone्गा समग्रजुन सानो शहरी वास्तुकलाको तत्वहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कम्पनी १ 60 s० को दशकमा इटालीमा स्थापना भएको थियो र अझै पनि उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू, नवीनता र आधुनिक डिजाइनद्वारा छुट्याइएको छ।
BELLITALIA Srl सानो शहरी वास्तुकला को तत्व उत्पादन गर्दछ। त्यहाँ प्रोफाइल गरिएको कंक्रीट बेंचहरू, सूचना बोर्डहरू, कंक्रीट र ढुots्गाका भाँडाहरू, फाउंटेनहरू, पोखरीहरू प्रान्त र खेल मैदानहरूमा ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्नका साथै कंक्रीट, ढु stone्गा वा नक्कल ढु stone्गाका कचरा बिनहरू छन्, जुन विश्वभरि चिन्न सकिन्छ।
बेलिटेलियाले सयौं फंक्शनल र एलिगन्ट आईटमहरू उत्पादन गर्दछ र बिक्री गर्दछ, जुन कुनै सहरी क्षेत्रमा उपयुक्त छ।
संग्रहलाई समृद्ध बनाउन, नयाँ सामग्रीहरू उदीयमान प्रोजेक्टहरूमा थपिए: स्टेनलेस स्टील, कास्ट फलाम र काठ यसरी कि तिनीहरू क the्क्रीटसँग मिल्दछ र पूर्ण नयाँ शैली सिर्जना गर्दछ।
यसको उत्पादनमा, BELLITALIA® ले बहुमूल्य पत्थर र संगमरमरको समुहको धनी र color्ग र विशेषता बनावटको साथ पनि प्रयोग गर्दछ।
आज बेलिटिया सडक फर्नीचरको उत्पादन र बिक्रीमा एक नेता हुन्। यसले विभिन्न प्रकारको क concrete्क्रीट (HPC, UHPC), पुनःप्राप्त प्राकृतिक संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट समग्र, चमकदार क concrete्क्रीट, काठ र स्टील जस्ता सामग्री प्रयोग गर्दछ।
BELLITALIA® द्वारा प्रयोग गरिएको क concrete्क्रीटको उत्पादनका लागि सामग्री वरपरका डोलोमाइट्सबाट आउँदछन्। यसले कम ईन्धन खपत र कम यातायातको लागि कम CO2 उत्सर्जनको लागि अनुमति दिन्छ।
इटालियन उत्खननका सामग्रीहरू पुन: प्रयोग गरिन्छन् र बहुमूल्य पत्थरहरूको समूह उत्पादन गर्न प्रयोग गर्दछन्।
यस तरीकाले उत्पादन गरिएको कc्क्रीट एक बहुमुखी, टिकाऊ र पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री हो, त्यसैले पुन: प्रयोगहरूको संख्या असीमित छ।
२०१ 2015 मा, BELLITALIA® ले एक नवीन फार्मूला विकसित गर्‍यो Ultratense कंक्रीट.
यो एक नयाँ सामग्री हो जुन तपाईंलाई शहरी सार्वजनिक ठाउँमा प्रयोग भएको नवीन र रमाईलो वस्तुहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
Ultratense कंक्रीट बेलीतालिया मात्र एक दर्ता ट्रेडमार्क हो। यो Marche विश्वविद्यालय (SIMAU) मा पर्यावरण र शहरी ईन्जिनियरि of संकाय र विश्व प्रसिद्ध डिजाइन स्टूडियो को संकाय को वैज्ञानिकहरु संग मिलेर विकसित गरीएको थियो।
भर्खरको अल्ट्राटेन्स कन्क्रेटी® टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट बनाइएको नवीन कative्क्रीट सामग्री अत्यन्तै प्लास्टिक हो र यसको गुणहरूको लागि यसलाई मोल्डमा पनि कास्ट गर्न सकिन्छ।
UTC® उत्कृष्ट मेकानिकल गुणका साथ एक सामग्री हो, जसले धेरै पातलो तह र घुमाएको त्रि-आयामिक अन्तरिक्ष सहित उत्पादनहरूको उत्पादन सक्षम गर्दछ।
5 /5( 28 वोट )
ठोस पोष्टहरूठोस आधार पोस्टहरूठोस बार पोस्टहरूकंक्रीट पोष्टहरूका लागि मोल्डहरूबाड़, ठोस पोष्टहरूप्याटेन्टठोस पोष्टहरूकास्टोरमा कंक्रीट पोष्टहरूकंक्रीट बार मूल्यठोस पोष्ट मूल्य सूचीफेंसका लागि ठोस पोष्टहरूप्यानल बाड्न को लागी ठोस पोष्टहरूबगैचाको लागि ठोस पोष्टहरूजाल को लागी ठोस पोष्टहरुवन जालका लागि ठोस पोष्टहरूठोस बार पोस्टहरूसजावटी कंक्रीट पोष्टहरूठोस पार्किbबोलार्ड्सटेरेस मुनि ठोस पोष्टहरूटेरेस मूल्य अन्तर्गत ठोस पोष्टहरूठोस पोस्ट आयामफेंस पोष्टहरूठोस बार पोस्टहरूकास्टोरमा क concrete्क्रीट फेंस पोष्टहरूपार्किंग बोलार्ड्सठोस पार्किbबोलार्ड्सUltratense कंक्रीट